Iindaba - Amaxabiso eNsimbi yaseYurophu afumana kwakhona njengoTyikityo lokuNgenisa elizweni
Amaxabiso eNsimbi yaseYurophu afumana kwakhona njengoTyikityo lokuNgenisa ngaphakathi
Abathengi baseYurophu beemveliso zamatye okusila bacotha kancinci kancinci ukwamkela ukunyuka kwamaxabiso okusila, phakathi / ngasekupheleni kukaDisemba 2019. Ukuqukunjelwa kwesigaba sexesha elide sokuphanzisa kukhokelele kuphuculo kwimfuno ebonakalayo. Ngapha koko, ukusikwa kwemveliso, okwenziwa ngabenzi bentsimbi basekhaya, kwinxalenye yokugqibela ye-2019, baqala ukuqinisa ukubakho kunye nokwandisa amaxesha okuhambisa. Abathengisi belizwe lesithathu baqala ukuphakamisa amaxabiso abo, ngenxa yokunyuka kweendleko zempahla eluhlaza. Okwangoku, iikowuteshini zokungenisa zikwiprimiyamu ejikeleze i-30 eurandi ngetoni nganye kwizibonelelo zasekhaya, kushiya abathengi baseYurophu benemithombo embalwa yokuhambisa.
Imakethi yentsimbi, ekuqaleni kukaJanuwari 2020, yayihamba kancinci, njengoko iinkampani zabuya kwimibhiyozo yeKrisimesi / yoNyaka oMtsha eyandisiweyo. Naluphi na uguquko kwimisebenzi yezoqoqosho luqikelelwa ukuba lululamile, kwixesha eliphakathi. Abathengi bayalumka, besoyika ukuba, ngaphandle kokuba ibango lokwenyani liphucula kakhulu, ukonyuka kwexabiso akunakulondolozeka. Nangona kunjalo, abavelisi bayaqhubeka nokuthetha amaxabiso phezulu.
Imakethi yaseJamani yahlala ithe cwaka, ekuqaleni kukaJanuwari. IiMills zibhengeza ukuba zineencwadi ezifanelekileyo zoku-odola. Ukwehliswa kwamandla okwenziwe kwisiqingatha sokugqibela se-2019, kube nefuthe elihle kumaxabiso emveliso yemveliso yokugaya. Akukho msebenzi ubalulekileyo wokungenisa elizweni oye waqatshelwa. Abenzi bentsimbi basekhaya batyhalela ukunyuswa okuthe kratya kwikota yokuqala / kwikota yesibini yokuqala.
Amaxabiso emveliso yamatye okusila eFrance aqale ukunyuka phakathi / ngasekupheleni kukaDisemba 2019. Umsebenzi uthathwe ngaphambi kwekhefu leKrisimesi. Ukuphuculwa kweencwadi zeMills. Ngenxa yoko, amaxesha akhokelayo okuhambisa andisiwe. Abavelisi be-EU ngoku bajonge ekuphumezeni amanye amaxabiso anyuka nge- € 20/40 ngetoni nganye. Ukuthengiswa kwesigidi ngoJanuwari kuqale kancinci. Iimarike ezisezantsi ziyasebenza kwaye abasasazi balindele ukuba ishishini lihlale liyanelisa. Nangona kunjalo, ibango kumacandelo aliqela kulindeleke ukuba lehle, xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Ikowuteshini yokungenisa elizweni, evuke kakhulu, ayisenako ukukhuphisana.
Amanani emveliso yemveliso yamatye okusila ase-Italiya afike ezantsi, kulo mjikelo, ekupheleni kuka-Novemba ngo-2019. Benyuka kancinci ekuqaleni kukaDisemba. Ngexesha leeveki ezimbini zokugqibela zonyaka, kwavuselelwa ngokuyinxenye ibango, ngenxa yomsebenzi wokubuyisela. Amaxabiso aqhubeka enyuka. Abathengi baqonde ukuba abenzi bentsimbi bazimisele ukukhulisa amaxabiso esiseko ukuze kulungiswe inkcitho yabo ekhulayo yempahla eluhlaza. Iindawo zokugaya ziye zaxhamla kunciphiso lokuphazamiseka kokungenisa elizweni, njengoko uninzi lwabathengisi behlabathi baphakamisa iikowuteshini zabo. Amaxesha akhokelayo okuhambisa ayandiswa ngenxa yokusikwa kwemveliso kwangaphambil, kunye nokuma / ukuphuma kwamatye ngexesha lekhefu leKrisimesi. Abaxhasi bacebisa ukunyuka kwamaxabiso. Amaziko eenkonzo ayaqhubeka nokusokola ukwenza imida eyamkelekileyo yenzuzo. Imbono yezoqoqosho imbi.
Imveliso yase-UK iqhubekile nokuwohloka, ngoDisemba. Nangona kunjalo, uninzi lwabasasazi bentsimbi babexakekile ekulungiseleleni iKrisimesi. Uku-odola ukutya, ukusukela ngeholide, kusengqiqweni. Uvakalelo olubi luye lwasasazeka ukusukela kunyulo jikelele. Abathengisi bemveliso yamatye okusila banyusa amaxabiso. Izivumelwano ezininzi zaye zagqitywa, ngasekupheleni kukaDisemba, ngamaxabiso asisiseko ajikeleze i-30 yeetoni ngetoni ephezulu kunakwindawo yokuhlala yangaphambili. Ukonyuka okuthe kratya kuyacetyiswa kodwa abathengi bayabuza ukuba oku kuzinzile, ngaphandle kokuba ibango liphucula kakhulu. Abathengi bayathandabuza ukubeka ii-odolo ezinkulu phambili.
Inani leendleko ezincumisayo ezenzeka kwimarike yaseBelgium, phakathi / ngasekupheleni kukaDisemba. Iigayo, kwihlabathi jikelele, zisebenzise ithuba lokunyuka kweendleko zokuqhubela phambili amaxabiso ezintsimbi. E-Belgium, abathengi bentsimbi, ekugqibeleni bayasivuma isidingo sokuhlawula ngaphezulu, nangaphantsi, kunabenzi besinyithi abacetywayo. Oku kwenza ukuba umsebenzi wokuthenga uqhubeke. Nangona kunjalo, abathengi babuza umbuzo wokuba ibango lokwenyani litshintshe kakhulu. Ukunyuka kwamaxabiso okuqhubekayo akuqinisekanga kwiimeko zangoku zeemarike.
Imfuno yaseSpain yeemveliso zeemveliso zokusila ngoku, zizinzile. Amaxabiso esiseko afunyenwe, ngoJanuwari. Ukunyuka kwamaxabiso okuqala kwaqala phakathi ku-Disemba kwaye kwagcinwa, ekubuyeni kwiiholide zalapha ekhaya. Ukutshabalalisa kwakuqhubeka, ekuqaleni kukaDisemba. Ngoku, iinkampani kufuneka zi-odole kwakhona. Abavelisi bafuna amaxabiso anyukayo okuhanjiswa kuka-Matshi kunye namaxabiso anyukayo ngo-Epreli. Nangona kunjalo, izinto ezingabizi kakhulu, ezivela kwimithombo yelizwe lesithathu, ebhukishwe ngo-Okthobha / Novemba, iyaqala ukufika. Oku kunokusebenza njengesixhobo sokulwa ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso asekhaya.
Isixhobo soMsebenzi eshushu sentsimbi esinyibilikisiweyo, ISetyhula Saw iBlade yensimbi, Hss M2 ISetyhula Saw Iincakuba, ISetyhula Saw Blade, Tct ISetyhula Saw Iincakuba, Hss M35 ISetyhula Saw iincakuba,